नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका प्रभाबशाली नेता ई. जीपी मैनालीले पत्रकार बलराम बानियाँको मृत्यु आत्महत्या नभएर राज्य संरक्षित हत्या भनेका छन् । कोरोना महामारीको बिचमा नेपाली समाजमा २२०० आत्महत्याका घटना भएका भन्दै उनले डाक्टरले गर्ने लाशको पोस्टमार्टमबाट सबै मृत्युको कारण पत्ता लाग्न सम्भब नहुने भन्दै कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार बलराम बानियाँको मृत्यु आत्महत्या नभएर हत्या भएको बताएका हुन् ।
पटक पटक ब्यबस्था फेरिएको समाचार लेखेर दशकौं गुजारेको एउटा निष्ठावान पत्रकारको मृत्युको कारण 'खोलामा हामफाल्नु कदापी हुन सक्दैन' ! बरु कारण त खोलासम्म पुर्याउने बातावरण र राज्यले सृजना गरेको परिवेश हो भन्दै मैनालीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् । अपराधिलाइ माफी/मिनाहा र बिचौलियाहरु पुरस्कृत भइरहँदा निष्ठावान पेशाकर्मीको शब खोला बगरमा भेटिनु लोकतन्त्र माथी प्रश्न उठिरहेको संकेत हो भन्दै उनले बानियाँको मृत्युप्रति शोक ब्यक्त गरेका हुन् ।
पत्रकार बानियाँको शव मकवानपुरको मान्दु हाइड्रोपावर तल सिस्नेरीमा फेला परेको छ। सोमबारदेखि बेपत्ता बानियाँको शव मंगलबार नै भेटिए पनि बुधबार मात्र सनाखत भएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार सोमबार साढे तीन बजेतिर बल्खु तरकारी बजारको बागमती करिडोरमा हिँडिरहेका एक व्यक्ति खोलातिर पसेका थिए। उनी खोलामा जानाजान छिरेका थिए वा कुनै दुर्घटनाबश खोलामा पस्न पुगेका थिए भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन्। उनको शव आँखा र टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा मकवानपुरको मान्दु हाइड्रोपावर नजिकै बागमती नदी किनारमा मंगलबार फेला परेको हो।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा स्रोतका अनुसार बानियाँले बोकेको मोबाइल सोमबार दिउँसो १ बजेर १३ मिनेटमा कलंकी क्षेत्रमा स्विच अफ भएको थियो। त्यसअघि १ बजेर ९ मिनेटमा उनको कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासँग उनको कुराकानी भएको थियो। सोही दिन अपरान्ह ३ बजेर २३ मिनेटबीचमा उनी बल्खु क्षेत्रमा मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा हिँडिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको एक अधिकारी बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार उनी आइतबार कलङ्की क्षेत्रमा बस्ने एक पत्रकारको घरमा बसेका थिए। मूलपानीमा निर्माणाधीन घर हेर्न पुगेका बानियाँ त्यतैबाट ती पत्रकारसँग उनको घर गएका थिए। मूलपानीमा उनीहरुले मदिरा सेवन गरेको र बैंकबाट पैसासमेत निकालेको अधिकारीहरु बताउँछन्। साँझ आफू ती पत्रकारको घरमा बस्ने उनले परिवारलाई जानकारी गराएका थिए। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी सोमबार दिउँसो कलंकी वा बल्खु आसपास कलंकी क्षेत्रमा मदिरा सेवन गरेको हुन सक्ने बताउँछन्।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील बानियाँ पत्रकारिता वृत्तमा इमान्दार र कुनै पक्ष नलिने पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन्। कान्तिपुरमा प्रुफ रिडरबाट काम सुरु गरेका उनले लामो समयसम्म मूलधारको रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनले नागरिक दैनिकमा पनि राजनीतिक ब्यूरो प्रमुखमा रुपमा काम गरेका थिए।